Git Sangit News » के मानसिक तनावले कपाल झर्नी कपालको रङ परिवर्तन हुनि समस्या हुन्छ ?
के मानसिक तनावले कपाल झर्नी कपालको रङ परिवर्तन हुनि समस्या हुन्छ ?
के मानसिक तनावले कपालको रङ परिवर्तन गर्छ ? यो प्रश्नको जवाफ ‘गर्छ’ भन्ने आएको छ । यो दाबी अमेरिका र ब्राजिलमा गरिएको अनुसन्धानले गरेकोे हो । उक्त अनुसन्धानमा अनुसन्धानकर्ताहरुले मुसाको प्रयोग गरेका थिए । मुसामाथि गरिएको अनुसन्धान अनुसार कोशिकाहरुले शरीरमा कपालको रङ निर्धारित गर्ने खुलेको छ । उक्त अनुसन्धानले मानसिक तनाव झेल्ने क्रममा कपालको रङ परिवर्तन हुने पत्ता लागेको हो ।
साथै मानसिक तनाबले कपाल झर्नी समस्या पनि आउने बैज्ञानिकहरुले बताएका छन ?
प्रकाशित मिति ११ माघ २०७६, शनिबार ०८:३६